Eritrea iyo Jabuuti oo la dhaxdhaxaadinayo – Somali Broadcasting Service
Saddexda wasiir Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea ayaa gaaray dalka Jabuuti, kaddib shir Asmara ku dhaxmaray madaxweynayaasha saddexda wadan.
Shirka ugu soo dhamaaday Jabuuti saddexda madaxweyne ayaa qodobadii ku jiray waxaa ka mid ahaa in wasiiradooda arrimaha dibedda ay u diraan Djibouti si nabad looga dhex dhaliyo labada dal ee deriska ah.
Wasiirradan ayaa markii ay tageen dalka Jabuuti waxaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha wasiirka arrimaha dibedda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Jabuuti.
Ma jiro wax war ah oo ay arrintan ka soo saartay wasaarradda arrimaha dibedda Jabuuti, hasse ahaatee maalinta berri ah ayaaa filayaa in saddexda wasiirro arrimo dibeddeed iyo dowladda Jabuuti u bilaawdaan wada hadallo.
Socdaalka ayaa qeyb ka ah dadaallo la doonayo in meesha looga saaro khilaafka u dhaxeeya dowladdaha Jabuuti iyo Eritrea iyadoo ugu danbeynti-na la filayo in uu dhaco shir ay yeeshaan madaxweynayaasha labada dowladdood.
Author adminmasterPosted on September 7, 2018 Categories Hot Topics / War Cusub, News, World
Previous Previous post: Kulan Lagaga Hadlayey Aqoonsiga Kaadhka Dhalashada Somalia Oo Dubia Lagu Qabtay
Next Next post: Kenya oo dib u soo celisay diyaarad ay la socdeen mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya